★မြန်မာ့အလင်း★: Pentagon Preparing for War with the 'Enemy': Russia
တတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကတော့ မကြာမီမှာ ကြုံတွေ့ရတော့မှာပါ။ ရုရှနဲ့ တရုပ်ဟာ သူတို့လုံခြုံရေးအတွက် အရမ်းကို စိုးရိမ်နေတဲ့ အနေအထားပါ။ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေကတော့ အချင်းချင်း နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကြာအောင် စောက်တင်းတွေပြော ရန်တွေဖြစ်လို့ကောင်းနေဆဲပါ။ နအဖ လူတွေကလဲ မြန်မာအချင်းချင်းဆိုရင် သတ္တိုတွေက ဘယ်ကနေ ထွက်လာမှန်းကို မသိပါဘူး။ ဒီမိုသမားတွေကတော့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အနောက်ကို အဖေလို့ခေါ်ရမှ စားဝင်အိပ်ပျော်နေတဲ့ ဘ၀ပါ။ ပြည်သူတွေကတော့ မိမိတို့ ကျောင်း၊ အလုပ် ကိစ္စတွေသာ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ တီဗီကြည့်ဖို့ အချိန်ရှိပေမယ့် အများအကျိုးအတွက် တနေ့ကို ၁၀ မိနစ်လေးတောင် မပေးလိုတဲ့ အတ္တသမားတွေပါ။ ကဲ.. ဒီအတိုင်း လမ်းဟောင်းကို ဆက်သွားမလား? ကမ္ဘာစစ်ကတော့ နည်းသထက် နည်းလာပါပြီ။
“Today the situation is much more serious than before August 2008….[A] possible recurrence of war will not be limited to the Caucasus.Irina Kadzhaev, South Ossetia political scientist, South Ossetia Information Agency, April 2009
“Under the new realities, Georgia’s war against South Ossetia may easily turn into NATO’s war against Russia. This would beathird world war.” (
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 5:31 AM